အမျိုးသမီးများအတွက်ပူနွေးသော O-Neck ပန်းထိုးပန်းထိုးအိတ်ထိန်များ ၀ ယ်ယူ - အခမဲ့ရေယာဉ်ခနှင့်အခွန်မဆောင်ပါ WoopShop®
S: ပခုံး ၃၃ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၉၅ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၆၁ စင်တီမီတာ၊
M: ပခုံး ၃၄ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၁၀၀ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၆၂ စင်တီမီတာ၊
L: ပခုံး ၃၅ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၁၀၅ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၆၃ စင်တီမီတာ၊ လက်အရှည် ၅၁ စင်တီမီတာ
XL: ပခုံး ၃၆ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၁၁၀ စင်တီမီတာ၊ အရှည် ၆၄ စင်တီမီတာ၊ လက်အရှည် ၅၂ စင်တီမီတာ
2XL: ပခုံး: ၃၇ စင်တီမီတာ၊ အကျယ်: ၁၁၅ စင်တီမီတာ၊ အလျား - ၆၅ စင်တီမီတာ၊
3XL: ပခုံး: ၃၇ စင်တီမီတာ၊ အကျယ်: ၁၁၅ စင်တီမီတာ၊ အလျား - ၆၅ စင်တီမီတာ၊
စူပါအင်္ကျီစူပါ! အရွယ်အစားဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီ! ရုရှား 50-52 မှ XXL! တစ်လအကြောင်းကိုပေးပို့
ငါ xl ၀ တ်တာကိုပထမဆုံးအကြိမ်မှာယူလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် xl အရွယ်အစားကိုယူခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ xxxl2ပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားကိုထပ်ယူပြီးပြန်ပြောင်းဖို့လိုတယ်။ ငါအကြံပြုထားတဲ့အရည်အသွေးကောင်းတယ်
အဆင်းလှ။ နူးညံ့။ ငါ ၅'၂ အမြင့် ၁၂၅ ပေါင်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရွယ်အစား L ကိုမှာယူသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည်
အရောင်အေးသောဂျာကင်အင်္ကျီ၊ ရောင်းသူ၏ဓာတ်ပုံကဲ့သို့ ငါလိုချင် - အခမဲ့သကဲ့သို့ထိုင်, အရှည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်လက်လည်း။ အကြှနျုပျ၏ parameters တွေကို: အမြင့် 168, og-90, ot-76, ob-98 ။ အမှာစာပြီးနောက် ၁၅ ရက်ကိုလက်ခံရရှိသည်။